अमेजन खोजशब्द अनुसन्धान सञ्चालन गर्न के उपकरणहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ?
खोजशब्द अनुसन्धान तपाईंको Amazon खोज इन्जिन अनुकूलन अभियान को एक महत्वपूर्ण चरण हो. तपाईंको लक्षित अमेजन खोज क्वेरीहरूमा उचित पहुँचले तपाइँको राजस्व बढाउन सक्छ र तपाईंको उत्पादनको स्थिति स्थिति सुधार गर्न सक्छ.
तपाईंले सम्भवतः ओभर-अनुकूलित उत्पादन शीर्षकहरू देख्नुभएको छ जुन अमेजनमा धेरै अप्रासंगिक किबोर्ड-भरिएको जानकारी समावेश गर्दछ।. यद्यपि, हामीले स्वीकार गर्न आवश्यक छ कि यी उत्पादनहरूसँग Amazon खोज परिणाम पृष्ठमा उच्च श्रेणी हो. तपाइँ आश्चर्य गर्न सक्नुहुनेछ किन प्रयोगकर्ताहरूले यस्ता लामो स्प्यामी हेर्ने शीर्षकहरूमा क्लिक गर्छन् र यी उत्पादनहरू खरीद गर्छन्. वास्तविकतामा, प्रयोगकर्ताहरूले स्वाभाविक रूपमा यस्ता शीर्षकहरू जस्तै गर्दैनन्, तर अमेजन एल्गोरिदमले तिनीहरूलाई प्रासंगिक र वर्णनत्मक पाउँछ - purchase required. यही कारणले तपाई अमेजन खोज परिणाम पृष्ठको शीर्षमा यस्तो शीर्षकहरू सामना गर्न सक्नुहुनेछ. यी लामो शीर्षकहरू प्रयोग गर्ने अनलाइन व्यापारकर्ताहरू थाहा पाउँछन् कि Amazon ए9एल्गोरिदमले कसरी कार्य गर्दछ. राम्रो तरिकाले अप्टिमाइजेसन शीर्षकहरू शिल्प गर्न अनलाइन व्यापारकर्ताहरूले खोजी खोज गर्नका लागि सटीक खोज सर्तहरू पहिचान गर्न खोजशब्द अनुसन्धान सञ्चालन गर्छन्. अद्वितीय अमेजन खोजशब्द शोध उपकरण संग, तिनीहरू संभावित कीवर्ड को एक खोज मात्रा को निर्धारण गर्छन र उत्पादन शीर्षक, विवरण, बुलेट अंक, अक्सर पूछे गए प्रश्नहरु, प्रतिक्रियाहरु, यहां सम्म कि छवियों मा उपयुक्त विविधताहरु को निर्धारण गर्दछ।.
यस आलेखमा, हामी तपाईंको उत्पादनको लागि सबैभन्दा सान्दर्भिक खोज सर्तहरू फेला पार्न कुन उपकरणहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, र कसरी तपाईँ यसलाई आफ्नो रैंकिंग र बिक्री बढाउन मद्दत गर्न सक्नुहुनेछ।. त्यसोभए हामीलाई तपाईंको अनलाइन व्यापारको लागि उत्तम कुञ्जी शब्दहरू खोज्न व्यावसायिक औजारहरू र व्यावहारिक रणनीतिहरूमा नजिकको नजर राख्नुहोस्.
अमेजन कुञ्जीशब्द अनुसन्धान अनुसन्धान उपकरण
Google को कीवर्ड प्लानर एक पेशेवर खोजशब्द अनुसन्धान उपकरण हो व्यापक दर्शकहरूको लागि उपलब्ध छन्. यो निःशुल्क र प्रयोगकर्ताको अनुकूल छ. यसको अतिरिक्त, यो सबै भन्दा सही डेटा प्रदान गर्दछ. यो उपकरणले तपाईंलाई कुनै पनि किवर्ड र कुञ्जी वाक्यांशहरूको लागि खोजी भोल्युम अनुमान गर्न मद्दत गर्न सक्छ. यसबाहेक, यसले तपाइँलाई अन्य सम्बन्धित वाक्यांशहरू फेला पार्न अवसर दिन्छ. प्रत्येक मिनेट Google ले टेराबाइट डाटा को सङ्कलन गर्दछ, यसकारण Google Keyword Planner जहाँ तपाईले कस्तो कीवर्ड वा वाक्यांश प्राप्त गर्दछ कति खोजी गर्दछ. तपाई भौगोलिक र दर्शकका विशेषताहरू (उमेर, लिंग, आदि) द्वारा तपाईंको खोजीलाई संकीर्ण गर्न सक्नुहुनेछ. ). यो विशेष गरी उपयोगी छ यदि तपाई अमेजनहरू वा अन्य व्यापारिक प्लेटफार्महरूमा आफ्नो उत्पादनहरू बढाउन चाहानुहुन्छ.
Google Keyword Planner को प्रयोग गर्न को लागी, तपाईंलाई एक निशुल्क एड्रेस खाता बनाउन को आवश्यकता हो. एकपटक तपाईंको खाता पछि, तपाइँ उपकरण ट्याब्लेटको अंतर्गत खोजशब्द योजनाकार फेला पार्नुहुनेछ. यहाँ तपाइँ केहि खोज को साथ आफ्नो खोज शुरू गर्न सक्छन् र धीरे-धीरे अधिक विशिष्ट लंबी पूंछ खोज सर्तहरुमा प्रयोगकर्ताहरु को खोज रहे हो. यो कार्य पूरा गर्नको लागि, तपाइँ "नयाँ खोजशब्दहरू खोज्नुहोस् र खोज भोल्युम खोज्नुहोस्" खण्ड खोल्न आवश्यक छ र आफ्नो लक्षित शब्द "तपाईंको उत्पादन वा सेवा" ट्याबमा सम्मिलित गर्नुहोस्।. अन्तमा, "विचार प्राप्त गर्नुहोस्" बटनमा क्लिक गर्नुहोस्. परिणामको रूपमा, तपाईले सम्बन्धित खोजशब्दहरूको सूची प्राप्त गर्नुहुनेछ. यद्यपि, तपाईंलाई निश्चित कि तपाईलाई खोजशब्द विचारहरु द्वारा खोज्नु पर्दछ, न कि विज्ञापनसमूह विचारहरु द्वारा.
गुगल कीवर्ड प्लानरले तपाईंलाई सम्बन्धित खोजशब्दहरूको लागि औसत मासिक खोजीहरू प्रदान गर्दछ. Amazon मा एक वास्तविक खोज भोल्युम तपाईं GKP मा प्राप्त डेटाबाट फरक हुन सक्छ. यद्यपि, यो डाटा अपेक्षाकृत समान हुनेछ, जुन तपाईले अमेजनमा कुन कुन शब्दहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ भनेर निर्धारण गर्न मद्दत गर्दछ.
अन्य अमेजन खोजशब्दों को एक विस्तृत विवरण जो तपाईं पा सकते हो सेमील्ट प्रश्नहरु र उत्तर (2 9) पृष्ठ.